बाख्रापालनमा रमाउँदै मानबहादुर- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
ओखलढुंगा — खिजिदेम्बा–७, रावादोलुका मानबहादुर खड्काले जीवन निर्वाहका लागि के मात्रै गरेनन् । काठमाडौंमा दशकौंसम्म ज्यामी कामदेखि, सुरक्षा गार्ड, व्यापार, व्यवसाय सबैथोक गरे । हाल उनी आफ्नै गाउँमा पाँच वर्षदेखि बाख्रापालन गरिरहेका छन् । ‘यशोदा एग्रो अर्गानिक कृषि फर्म’ भनेर कम्पनी दर्ता गरी वाख्रापालन थालेका हुन् ।
फार्ममा ४० वटा बोयर जातकासहित ११३ बाख्रा छन् । बीउका लागि बोयरका तीनवटा बोका छन् । त्यसमध्येको एउटा दक्षिण अफ्रिकाबाट १ लाख ७१ हजारमा मगाएका हुन् । अन्य दुईवटा हेटौंडास्थित बोयर फार्मबाट किनेर ल्याएका हुन् । अन्य बाख्रा खरी जातका छन् । सानन, जमुनापारी जातका बाख्रा १० वटा जति छन् ।
‘लगानीको हिसाबले हेर्ने हो भने आम्दानी प्राप्त भइसकेको छैन’ मानबहादुरले भने, ‘हालसम्म ३६ वटा बोका बिक्रीबाट २५ लाख हाराहारी मात्र नगद आम्दानी भएको छ ।’ पशुपालन आफैंमा लगानी गर्नेबित्तिकै आम्दानी खोज्ने पेसा नभएकाले टिक्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए । उनले फार्ममा ५ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । घाँस खेती सुरु गरेका छन् । नेपालमा घाँसको बीउ पाउन गाह्रो भएपछि नाइजेरियादेखि मगाएर घाँस छरेका छन् ।
उनले हालसम्म सरकारी अनुदान जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट १ लाख १२ हजार खोर सुदृढीकरणका लागि पाएका छन् । अन्य कुनै कार्यालयबाट सरकारी अनुदान लिएका छैनन् । पशु विकास तथा कृषि कार्यालयबाट दिइने अनुदान अधिकांश कमिसन दिनेहरूलाई मात्र वितरण हुने गरेकाले नपाएको गुनासो छ । वास्तविक किसानहरूले अनुदान नपाउने प्रवृत्तिले गर्दा पनि नेपालमा धेरै किसानले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन तथा कृषि गर्न नसकेको बताए ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ११:५५
मंसिर २३, २०७६ जितेन्द्र साह
विराटनगर — प्रदेशका सबै जिल्ला कारागारका कैदी र थुनुवामध्ये आधाभन्दा बढी बलात्कार र लागूऔषध कारोबारसँग सम्बद्ध रहेको पाइएको छ । ५ हजार १ सय ४८ मध्ये २ हजार ७ सय ७४ जना ( ५३.८८ प्रतिशत) यी अपराधका हुन् । तीमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत ४० वर्षभन्दा मुनि उमेर समूहका भएकाले चिन्ताको विषय भएको प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।
‘ऊर्जाशील उमेरका जनशक्ति कारागारमा छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा प्रणाली चुकेको हो वा न्यायिक प्रक्रियामा त्रुटि छ कि ? वा यसका लागि सामाजिक वा पारिवारिक माहोल एवं संस्कार दोषी हुन् कि ? सोच्नु जरुरी छ ।’ लागू दुव्यर्सनसम्बन्धी मनोसामाजिक परामर्शदाता सञ्जीव चापागाईले समाज, परिवार र विद्यालयबाटै यि अपराधविरुद्धको चेतना आवश्यक रहेको बताए ।
नयाँ कानुनी संहिताले बिहेको उमेर २० वर्ष तोकेपछि संख्यात्मक रूपले पनि बलात्कारको मुद्दा बढेको अधिवक्ता कला त्रितालले बताइन् । ‘२० वर्ष नकट्दै सहमतिमा यौनसम्बन्ध भए पनि कानुनले जबरजस्ती करणी नै मानेको छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, अहिलेको आधुनिक खानपिनले बालबालिका चाँडै हुर्किन्छन्, विपरीत लिंगीप्रति आकर्षणका कारणले कतिपयले किशोर अवस्थामै यौनजन्य गतिविधि थाल्छ, अनि बिहे गर्ने स्थिति नभएपछि र अन्य विभिन्न कारणले पछि अभिभावकले नै बलात्कारको
मुद्दा हाल्छन् ।’
अपवादका घटनाबाहेक बलात्कारका अधिकांश उजुरी सही हुने गरेको मोरङका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताए । ‘पीडितको बयान र घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाटै सत्य वा झूटो के हो भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘थोरै पनि शंका लागेमा मुद्दा अगाडि बढाइहाल्दैनौं, कानुनले दिएको तीन दिनको छानबिन अवधिभर वास्तविकता बुझ्छौं, झूटो देखिएमा सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्छौं ।’
प्रदेशका चौधै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयले वर्ष ०७३/७४ मा बलात्कारका ३ सय ६, बलात्कार प्रयासका १ सय १५ र लागूऔषधका ५ सय ३७ मुद्दा दर्ता गरे । तीनैवटा अपराधमा ०७३/७४ मा ३३ महिलासहित १ हजार २ सय २९ जनालाई पक्राउ गरिए पनि २८ महिलासहित १ सय ६० जना फरार रहे ।
प्रदेशभरका प्रहरी कार्यालयले ०७४/७५ मा बलात्कारका ३ सय ८६, बलात्कार प्रयासका १ सय ९६ र लागूऔषधका ७ सय ३० मुद्दा दर्ता गरेको तथ्यांक छ । यी अपराधहरूमा २०७४/७५ मा ३६ महिलासहित १ हजार ३ सय ७७ पक्राउ परे भने १ महिलासहित १ सय १९ जना फरार रहे ।
यसैगरी, ०७५/७६ मा बलात्कारका ५ सय ४७, बलात्कार कोसिसका २ सय ३५ र लागूऔषधका ५ सय ८१ मुद्दा दर्ता भए । तिनमा ४३ महिलासहित १ हजार ५ सय २२ पक्राउ परे भने २ महिलासहित १ सय ९२ फरार रहे । ०७६/७७ को कात्तिकसम्म प्रदेशमा बलात्कारका १ सय ४३, बलात्कार प्रयासका ६७ र लागूऔषधका ३ सय ३३ मुद्दा प्रहरीले दर्ता गरेको छ ।
यी दुई अपराधमा युवा उमेरको सहभागिता बढ्नुमा न्यायिक प्रक्रियालाई दोष दिन नमिल्ने वरिष्ठ अपराधशास्त्री माधवप्रसाद आचार्यले बताए । जहिले र जता पनि मोडिन सक्ने अपरिपक्व उमेर यसको कारण भएको उनको ठम्याइ छ । ‘कम उमेरकालाई कानुन र सजायबारे हेक्का रहन्न,’ अपराधशास्त्री आचार्यले भने, ‘अरूको लहैलहैमा सहजै लाग्न सक्छन् ।’
उनको अनुसार भारतसँग जोडिएको खुला सिमानाका कारण लागूऔषध कारोबारबाट चाँडै पैसा कमाउने मनस्थिति र साथीभाइको संगतले समेत कम उमेरका अपराधमा पर्छन् । जसरी भए पनि धनी हुन अभिप्रेरित गर्ने अहिलेको सामाजिक सोच एवं नैतिक मूल्यमान्यतामा आएको ह्रास अपराधका कारण भएको समाजशास्त्री मुकेश सिंहले बताए ।
‘धन, शक्ति प्राप्ति र सफलताको अन्धदौडमा समाज कुदिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको समाजमा त्यागको भावना नै छैन, असल एवं नैतिकवानको सम्मान गर्ने परिपाटी नभएसम्म यी अपराधहरू रोकिन्न ।’ प्रदेशका कारागारहरूमा लागूऔषधका ८ सय ३८, जबरजस्ती करणीका १ हजार ५ सय ४८ र जबरजस्ती करणी उद्योगका ३ सय ८८ कैदी/थुनुवा छन् ।
लागूऔषध मुद्दामा सबैभन्दा बढी झापामा ३ सय ४, सुनसरीमा २ सय ९१, मोरङमा १ सय ७५ र उदयपुरमा ४१ कैदी/थुनुवा छन् । जबरजस्ती करणी मुद्दामा भने सबैभन्दा बढी सुनसरीमा ६ सय १६, झापामा २ सय ९९ र मोरङमा २ सय ६२ कैदी/थुनुवा छन् । जबरजस्ती करणी उद्योगमा सबैभन्दा बढी मोरङमा २ सय ३७, सुनसरीमा ८० र इलाममा ११ जना कैदी/थुनुवा छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ११:४७
बिर्तामोडमा ‘मास स्क्रिनिङ’
धरानमा १० वर्षीय बालकलाई कोरोना
इलामका दुई पालिकामा लकडाउन
सशस्त्र‍ प्रहरीको प्रदेश १ गणमा थप १६ जनामा कोरोना संक्रमण